Ngwá Ụlọ Usoro
Mbọsị Ụka 9 Jenụwarị 2022
Ngwá Ụlọ Usoro Sama bụ ezigbo usoro arịa ụlọ nke na-enye arụmọrụ, ahụmịhe nke mmetụta uche na ịpụ iche site na ntakịrị pere mpe, ụdị bara uru yana mmetụta ọhụụ siri ike. A na-atụgharịkwa echiche sitere na ọdịnala sitere na uri nke uwe ejiji na-eyi n'ememe Sama site na egwuregwu nke geometry conic na metal na-egosipụta usoro. A na-ejikọta ọdịdị ọdịdị nke usoro ahụ na ịdị mfe na ihe, ụdị na usoro mmepụta, iji nye ọrụ & nkwupụta ụda; aesthetic uru. Nsonaazụ a bụ usoro arịa ụlọ ọgbara ọhụụ na-enye mmetụta pụrụ iche na oghere.
Fraịdee 7 Jenụwarị 2022
Ụlọ Ọgbakọ Ntụrụndụ
Ụlọ Ọgbakọ Ntụrụndụ Laghachite na ndụ dị mfe, anyanwụ site na windo na onyinyo windo na-ekpuchi. Iji ka mma igosipụta eke ekpomeekpo na mkpokọta ohere, na-eji zuru ezu nke log imewe, mfe ma nkecha, humanistic nkasi obi, nchegbu nchegbu nka ikuku. Charda, obi uto, na onodu uhere di iche. Nke a bụ ngosipụta ọzọ nke ime, ọ bụ ihe okike, dị ọcha, na-agbanwe agbanwe.
Akọrọ Tii Nkwakọ Ngwaahịa
Wenezdee 5 Jenụwarị 2022
Akọrọ Tii Nkwakọ Ngwaahịa Ihe a haziri bụ akpa na-arụ ọrụ na agba agba. Ihe eji eji ihe eji eme ihe ohuru na nke na enye oria n’emeputa uzo kwekoritara nke na - egosiputa ogwu SARISTI. Ihe di iche na imewe anyi bu ikike anyi inye nke oge a ka anyi kpoo tii. Animalsmụ anụmanụ ndị e ji mee ihe na nkwakọ ngwaahịa na-anọchi anya mmetụta uche na ọnọdụ ndị mmadụ na-ahụkarị. Dịka ọmụmaatụ, nnụnụ Flamingo na-anọchite anya ịhụnanya, anụ ọhịa Panda na-anọchi anya izu ike.
Ngwunye Mmanụ Oliv
Tiuzdee 4 Jenụwarị 2022
Ngwunye Mmanụ Oliv Dị ka ndị Gris oge ochie na-ete ma na-eme mmanụ oliv ọ bụla amphora (akpa) iche, ha kpebiri ime taa! Ha weghachiri ma tinye oru nka na omumu ochie a, na imeputa ihe omuma nke oge a ebe nke obula n’ime karama 2000 emeputara nwere uzo di iche. A na-eme karama ọ bụla n'otu n'otu. Ọ bụ otu ụdị ụdị, nke sitere n'ike mmụọ nsọ Grik oge ochie nwere mmetụ ọgbara ọhụrụ nke na-agba aja ochie mmanụ ochie. Ọ bụghị ajọ ọnọdụ; ọ bụ usoro okike na-emepe emepe. Usoro mmepụta ọ bụla na-emepụta atụmatụ dị iche iche 2000.
Marais Onyinye Onyinye Maka Achicha Satọdee 2 Julaị
Cliff House Obibi Izu Ụka Fraịdee 1 Julaị
Chongqing Zhongshuge Ebe A Na-Ere Akwụkwọ Tọọzdee 30 Juun
Ngwá Ụlọ Usoro Mgbanaka Pusi Bed Ụlọ Ọgbakọ Ntụrụndụ Akọrọ Tii Nkwakọ Ngwaahịa Ngwunye Mmanụ Oliv